BangEa – Nbudata ngwanrọ azụmaahịa mmemme
Ibu Ibu Ntọala
Manuel nyere iwu
Ntọala igbu oge
Uru & Mfu
Ahịa nke oge & Pend Order
Ahịa & Pend Order
Ogwe mmechi na-akwado ọrụ
Tinye Panel Order
Oghere Tinye nke ọma
Ezi Tinye Lot x
Oke mgbakwunye dị mma
Weghachite Oghere Tinye
Ntughari Tinye Lot x
Mepee akpaaka wee mechie
Mmalite nke oge
Hedg ndị ọzọ
Hedg akara ndị ọzọ
Ebe obibi ọgbakọ
Ngwanrọ EA saịtị niile nweere onwe gị iji
EA bụ abbreviation nke ọkachamara ndụmọdụ nwere ọgụgụ isi akpaka trading usoro.
Akụrụngwa azụmaahịa mmemme.
Chọpụta ahịa akụkụ K-line zuru oke na akpaaka
Nke a bụ ajụjụ enyi ya jụrụ na ọgbakọ EA BANG. N'ezie, ọrụ a adịghị mkpa ka ọ bụrụ ihe ngosi, n'ihi na EA dị ugbu a nwere ike ịghọta ya. Enwere ụzọ abụọ iji nweta nke a. Gịnị bụ mkpọda nke k-line? Ọ bụ ahịrị emere site na ijikọ N […]
Ọdịiche dị n'etiti azụmaahịa mmemme EA na edemede
EA: Oge ọ bụla ọnụahịa na-agbanwe, koodu dị na EA na-egbu otu ugboro; Script: Mgbe edemede ahụ gachara, a na-eme koodu ahụ naanị otu ugboro. Ka anyị wee ghọta ọdịiche ahụ nke ọma, Maazị Tang nke EA Bang depụtara EA na edemede pụrụ iche iji gosipụta, ọrụ ya bụ iwepụta oge. […]
Nweta adreesị IP nke ihe nkesa azụmaahịa
Nke a bụ ihe a chọrọ n'aka enyi na EA State forum tupu. Ọ na-eji EA mmemme anyị na-azụ ahịa ugboro ugboro, na usoro ịzụ ahịa bụ ụdị brushing. Anyị niile maara na ọsọ azụmahịa na-enwe mmetụta dị ukwuu na atụmatụ nke azụmahịa ugboro ugboro. Ọ na-ejikarị VPS […]
Na otu EA na-achịkwa iwu nke EA ọzọ, ị nwere ike ime nke a.
N'ime usoro iji ahia mmemme, ị zutere ọnọdụ dị otú ahụ? Ọnọdụ mmeghe nke aEA ka mma, na ọnọdụ mmechi nke bEA ka mma. Ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na EA abụọ a nwere ike jikọta ọnụ! N'ozuzu, anyị na-eji 1 EA imeghe ma mechie ọnọdụ. Ọ bụrụ na m chọrọ ijikwa […]
Banyere faịlụ nhazi paramita nke trading programmatic, o zuru ezu ịgụ akụkọ a
Otu esi eji faịlụ nhazi EA? Onye ọrụ na-eji Bang EA's Hedging EA maka azụmaahịa dị iche iche. A na-eme ka ọrụ nke ngwa EA ngwa ngwa mgbe niile. Ka oge na-aga, e nwere ọtụtụ narị ọrụ EA, ya mere, jiri naanị ọnọdụ nke panel akpaka na-emeghe ma mechie ọnọdụ. Dị ka ihe atụ, e nwere ọtụtụ […]
Atụmatụ mweghachi ntughari ọ bụ nke a pụrụ ịdabere na ya?
N'ime afọ 10 gara aga nke ịzụ ahịa simulated, atụmatụ ịzụ ahịa mgbe niile mere mfu na-aga n'ihu, na n'ime usoro ahụ, e gburu ya nke ọma dịka atụmatụ azụmaahịa ya setịpụrụ. N'ahịa n'ọdịnihu, ihe gbasara nke puru omume nke ọnwụ bụ n'ezie nke ukwuu, ọ pụkwara ịbụ ihe efu. Ọ bụrụ na anyị na-agbaso atụmatụ azụmaahịa na […]
Azụmahịa EA na-echekwa nseta ihuenyo na-akpaghị aka
Mara: Ebufere akụkọ a na www.eabang.com. Akụkọ a bụ vidiyo nke Maazị Tang dekọrọ. Maka ndị na-adịghị amasị ikiri vidiyo, ị nwere ike ịgụ akụkọ ahụ. Otu esi ese nseta ihuenyo na-akpaghị aka mgbe EA mepere ma mechie iwu? Ọrụ a bụ arịrịọ sitere n'aka onye otu EA. Ọ na-ejikarị azụmahịa mmemme. O nwere […]
Kedu ka esi aghọta ọdịiche dị n'etiti mmanya ụbọchị na macrocycle?
Ihe dị iche na-esite na ụdị mmanya dị iche iche fixe d periods. Dị ka egosiri na ọnụ ọgụgụ dị n'okpuru ebe a, dị ka eserese 1 nkeji na chaatị kwa ụbọchị, ọtụtụ K-ahịrị na chaatị nkeji 1 nwere ike inwe nanị ntakịrị ọnụ ọgụgụ TICK. N'ime oge adịghị arụ ọrụ nke ụfọdụ ụdị ndị na-adịghị ewu ewu, ahịrị K- nkeji nkeji na-agbanwe […]
Kedu ihe m ga-eme ma ọ bụrụ na EA anaghị emechi iwu
1. Pịa na "Zụta Open" ma ọ bụ "Sell Open" na oghere mmeghe iji chọpụta ma e nwere iwu jupụtara. Ọ bụrụ na ọ dịghị usoro ọhụrụ, biko lelee ma mt4 na mt5 abanyela, na ma "Algo Trading" na A na-agbanye "Kwe Ka Mbubata DLL" .EA nrụnye 2.Ọ bụrụ na e nwere usoro ọhụrụ, anaghị emechi iwu anaghị ejikwa, Ebe [...]
Hedg akara ọzọ
A na-eji ọrụ a maka ọtụtụ akara. Mgbe N'ozuzu T / P na-emechi panel na-akpalite, ego nke ya uru hedges ọnwụ jisiri nke a EA maka ọtụtụ otu iji, na ole nwere ike mechie; Pofit>0: Uru nke iwu abụọ a kpuchiri ekpuchi karịrị 0; Ọnwụ akaụntụ ga->%: Mfu na-ese n'elu mmiri/Banlence>5%.
Nzukọ ọgbakọ kacha ọhụrụ
Hedging EA v3.8.8.4 nbudata na melite nkọwa ọrụ
Ụdị akara ngosi ọtụtụ, ọ na-agba ọsọ maka ọnwa 5, uru ya bụ 50
Hedging EA v3.8.8.3 nbudata na melite nkọwa ọrụ
N'ozuzu S/P ntọala maka mmechi panel
Nleba anya na-adị nwayọ.
© 2022 BangEa. Ewubere iji WordPress na Gburugburu ColibriWP .